Mamitaha mankany "mandeha" | Famoronana an-tserasera
Mamitaha amin'ny «mandeha»
Laura Carro | | sary, Photoshop, Cheats
Androany isika dia hianatra mandehana lavitra na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao tianao, fa ity dia ity tsy mila mihetsika Avy any an-trano.
Tonga aminao ve izany hoe te hanao vazivazy amin'ny namana izany ianao ary mieritreritra izy ireo fa hanao dia lavitra? Eny, mba hilalao vazivazy, na hametrahana sary dia atolotray anao ity fampianarana ity. Mandehandeha eran'izao tontolo izao, na mitsangatsangana mandritra ny fotoana maromaro amin'ny dingana roa miaraka amin'ny Photoshop.
Voalohany dia tsy maintsy misafidy sary roa izay amin'ny zoro mitovy amin'izany, hialana amin'ny famoronana sary tsy mifandanjana na toa diso be fotsiny izy io satria fotsiny hoe nametraka sary ambadika izay nalaina avy teo ambany izahay ary sary lehibe izay manana ny zoro mifanohitra tanteraka. Noho izany isika nampidininay ny fahafaha-mandeha avy amin'ny sary etsy ambony hahazoana antoka fa mifanitsy ny zoro ary amin'ny farany dia mahatratra vokatra saika lavorary isika, raha tsy tonga lafatra.
avy eo mifidy ny vola izahay ny sary misy anao, dia azonay antoka fa milamina ny sisiny amin'ny fipihana "Manatsara sisiny" ary manamboatra ny safidin'ny fikandrana pop-up izay miseho rehefa avy manindry eo, ary rehefa manana ireo sisiny milamina ireo isika dia mamafa azy.
Mba hiantohana ny antsipiriany tsara kokoa, dia esorinay amin'ny habe antonony ary esorina kely ilay hamafana, mba ho afaka fafao ny potipotika navela tao anaty lavaka sasany, na tsy fahalavorariana hafa izay tsy voamarika tamin'ny dingana teo aloha.
Raha vantany vao manana an'io tsy ho ela isika dia hanamboatra ny Haavo an'ity sary ity, noho izany dia tsy maintsy voafantina ny Layer-ny. Andao mankany amin'ny menio Sary - fanitsiana - haavo ary avy eo dia ampifanarahintsika amin'ny zavatra tiantsika izy ireo, arakaraka ny ahatongavany any aoriana no tsara kokoa, amin'ny lafiny famirapiratana sy aloka.
Manitsy ny sary kely kokoa ihany koa isika avereno jerena ny loko. Noho izany dia miditra ao amin'ny menio isika Sary - fanitsiana - fandanjana loko, ary miverina mamerina miverina arakaraka ny any aoriana isika, raha toa ka ambadika mavomavo na mena kokoa ny endriny, dia manao toy izany ihany koa amin'ny sary lehibe.
Ary farany dia afaka manampy ny antsipirian'ny asio sivana miloko firafitra, noho izany dia tsy maintsy ataontsika a fanitsiana sosona araka ny hitantsika tamin'ny fampianarana hafa azonao zahana eto, amin'ny Famoronana an-tserasera.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Mamitaha amin'ny «mandeha»
Teresita dia hoy izy:
Tena mazava sy mahafinaritra. Misaotra Hanandrana tsy ho ela aho !!!!!
Valiny tamin'i Teresita